iPad - iPhone News | IPhone News (Pejy 5)
Mitsitsia hatramin'ny 130 € amin'ny alàlan'ny fividianana iPad an'i iPad Reurbished
Apple dia manolotra amin'ny tranokala ofisialiny iPads namboarina (nohavaozina) izay ahafahanao mitahiry hatramin'ny 130e arakaraka ny maodely.
Ahoana ny fanovana ny teny miafin'ny root an'ny iPad jailbroken anao
Mampianatra anao izahay hanova ny tenimiafin'ny mpampiasa (faka) super an'ny jailbroken iPad anao amin'ny alàlan'ny terminal finday hapetrakay amin'ny Cydia
Noho ny iOS dia afaka manafaka toerana amin'ny fitaovantsika amin'ny alàlan'ny Mail isika satria manana habaka ny cache ary ny kaonty
Raha tsy mandeha ny Wi-Fi iPad anao dia araho ireto dingana ireto
Amin'ny tranga maro dia tsy mandeha tsara ny fifandraisana Wi-Fi an'ny iPads, araho ireto dingana ireto hanandrana hamerina amin'ny laoniny ny fifandraisana
Azo alaina izao ny Modern Combat 5. Sary manaitra nefa miaraka amin'ireo teboka ratsy izay mahatonga ilay tsiro avelany hamidy mangidy.
Sintomy ny rohy iOS 8 Beta 4
24 ora aorian'ny famoahana ny iOS 8 Beta 4 ho an'ny mpamorona an'ny Apple, etsy ambany dia asehonay anao ireo rohy hametraka azy amin'ny fitaovantsika.
Icon Resizer: ovao ny haben'ny sary masina (Cydia)
Noho ny fanitsakitsahana ny Icon Resizer dia azonay atao ny manova ny haben'ny kisary rehetra amin'ny zana-kazo iOS
Ilay tweak resahintsika anio, ClockFirst, dia mametraka ny fotoana eo amin'ny efijery hidin-trano foana aloha.
Filza File Manager dia rindranasa Cydia vaovao ahafahantsika mitantana sy manitsy rakitra ao anatin'ny iOS, toy ny iFile.
TapToSnap: kitiho ny efijery mba haka sary (Cydia)
Misaotra ny fikitihana TapToSnap afaka misambotra sary avy amin'ny fakan-tsary isika amin'ny alàlan'ny fanindriana eo amin'ny efijery: kitiho ny efijery ary alao ny sary.
Asehonay anao ny emoji vaovao rehetra izay tsy ho ela eo amin'ny fitendry
Apple dia nanomana fizahan-tany tanàna virtoaly amin'ny fampiharana Maps an'ny iOS 8
Angry Birds Transformers no ho lalao vaovao an'i Rovio, izay anaovan'ny Angry Birds ireo robot Transformers
Ahoana ny fangatahana famerenam-bola ao amin'ny App Store
Azavainay ny dingana mba hamerenan'i Apple ny vola amin'ny fividianana fampiharana
iOS 8 dia manolotra fanitarana vaovao ho an'ny mpamorona izay hanatsara ny traikefan'ny mpampiasa ao amin'ny iOS 8
Fihetseham-po voalohany amin'ny beta voalohany an'ny iOS 8. Maro amin'ireo fiasa izay efa nambara no mbola tsy misy, toy ny fitendry miaraka amin'ny tolo-kevitra
Ny ipad dia iray amin'ireo fitaovana ampiasaina indrindra hijerena sary vetaveta.
Avy amin'ny Actualidad iPad dia tianay hankafizanao ny sary mombamomba ny OS X Yosemite sy ny iOS 8, ireo rafitra miasa Apple roa vaovao
Famerenana ny kitendry ho an'ny iPad Mini Claviar 7, fitendry Bluetooth koa mifanaraka amin'ny takelaka hatramin'ny 8 santimetatra amin'ny Android.
Jereo ny doka iPad Air vaovao anaovan'ny mpamoron-kira sy mpandeha iray mampiasa ny takelaka Apple ho an'ny karazan-jaza rehetra.
Ataovy sary eo amin'ny pikantsary miaraka amin'ny ScreenPainter raha vao manindry ny bokotra ianao hisamborana ny efijery ary avy eo tahirizo na kopiao
Manomboka amin'ny iPad 3 dia navelan'i Apple hizara Internet (tethering). Inona no fomba fampiasa be indrindra: mamorona tamba-jotra Wi-Fi, mampiasa Bluetooth na USB?
Game Boy GBA4iOS emulator dia tsy misy intsony noho ny tsindry avy amin'i Nintendo
Nintengo dia nanala ny tetikasan'ny GBA4iOS izay ahafahan'ny mpampiasa iOS misintona sy milalao lalao amin'ny Game Boy console malaza amin'ny iDevices-ny
Raha te handrehitra ny efijery an'ny iDevice ianao amin'ny paompy roa eo amin'ny efijery na hamaha azy amin'ny fikorisana, SmartTap no tweak anao
Ahoana ny fametrahana ny iPad ao amin'ny Safe Mode ary manamboatra ireo lesoka Cydia
Te hamafa tweak iray nanimba ny fitaovanao ve ianao ary tsy afaka mamadika ny iPad? Ampidiro ny Safe Mode ary hamafa ireo fampiharana tianao
Raha te-hanafina na hanaisotra kaody ao amin'ny AES256 isika, CryptoNotes no tweak azontsika alaina maimaim-poana ao amin'ny repo BigBoss
Miraikitra: apetaho eo amin'ny efijery fanidiana (Cydia) ny paositra iray
Raha te hahatadidy zavatra manan-danja amin'ny lafiny maso ianao dia mamporisika anao hiezaka ny manova ny Sticky ahafahanao mametraka post-it amin'ny iPad anao.
Rehefa voadidy zato isan-jato ny bateria dia hampandre antsika varavarankely sy feo kely i BatteryFullAlert ho fanampin'ny fampahalalana momba ny Tª anao
Ny fampiasana teknolojia vaovao ataon'ny ankizy dia mbola olana iray mampiady hevitra, miaraka amin'ireo manampahaizana miteny manohana ary ny hafa manohitra.
myMail dia mpanjifa mailaka maimaimpoana ho an'ny iPhone sy iPad izay manana ny fiasa ilaina rehetra mba ho safidy tsara amin'ny Mail
Apple dia mety mikasa ny hampiditra fampidinana rakitra 24-bit amin'ny alàlan'ny iTunes, amin'izay hampiakarana ny kalitaon'ny mozikao.
Inona no antenaintsika amin'ny iOS 8 manaraka?
Hodinihinay ny vaovao mety ho azon'ny iOS 8 ho eo ambany sandriny, ny rafitra fiasa manaraka ho an'ny finday Apple.
Ity fanovana vaovao avy any Cydia, Aria ity dia manampy fiasa vaovao amin'ny fampiharana iOS 7 "Music" teratany.
Nanararaotra ny fitsidihan'i Billy Joel ny seho nataony i Jimmy Fallon hiara-hihira aminy amin'ny alàlan'ny iPad Air sy fampiharana iray antsoina hoe Loopy.
Safari Downloader +: mpitantana fampidinana mahery vaika mahery kokoa (Cydia)
Miaraka amin'ny Safari Downloader + azontsika atao ny misintona karazana rakitra amin'ny alàlan'ny Safari ary mitahiry azy ireo amin'ny fitaovantsika: horonan-tsary YouTube, sary ...
Safari Download Enabler: mpitantana fampidinana ao Safari (Cydia)
Ity fanovana vaovao ity, Safari Download Enabler, dia "mametraka" mpitantana fampidinana izay ahafahantsika misintona rakitra avy amin'ny Safari
IPad iza no tokony hovidiko?
Izahay dia mamakafaka ireo safidy samihafa atolotry ny Apple antsika rehefa mividy iPad.
Ianaro ny fomba hamehezana ny sensor hamirapiratra ao amin'ny iOS 7
Ampianarinay ianao hibaiko ny sensor ny famirapiratan'ny iDevices hanitsiana ny fiasan'ny iOS 7,
BookBook, arovy ny iPad amin'ny fonony boky voalohany
Roa ambin'ny folo atsimo no manolotra ny bokin'ny BookBook ho an'ny iPad Air, tranga vaovao hiaro ny iPad anao eo ambanin'ny hatsaran'ny boky mahazatra.
Bloard: ampiasao ny keyboard mainty iOS 7 (Cydia) na aiza na aiza
Ao amin'ny iOS 7 dia misy lohahevitra roa amin'ny keyboard izay azontsika ampiasaina amin'ny alàlan'ny tweak Bloard: mainty sy fotsy.
Araka ny tsiliantsofina farany sy fanaraha-maso momba ny mpandalina, mamela anao izahay hanombatombana ny fotoana hahitan'ny vokatra vaovao an'i Apple ny mazava amin'ity taona ity.
Asehonay aminao ny fomba fanavaozana ny iOS 7.0.6 sy ny rohy fampidinana mivantana an'ny firmwares
Assistive +: ampio fanampiana manampy amin'ny asa bebe kokoa (Cydia)
Raha te hanana asa maro hafa ianao amin'ny bokotra assistiveTouch vaovao, sintomy ny tweak Assistive + avy any Cydia ary ankafizo ireo fiasa rehetra
Raha tsy mandeha ny bokotra Home na ny bokotra Power amin'ny iPad anao ary te haka pikantsary ianao dia azonao atao ny mampiasa ny fitaovana iOS: assistiveTouch
Kaody fanodinam-potoana: isaky ny ora isan'andro dia kaody fidiovana hafa (Cydia)
Raha te hanana fiarovana bebe kokoa amin'ny iPad ianao dia azonao atao ny mametraka TimePasscode, izay mametraka kaody hafa arakaraka ny ora
Raha te hankafy famantaranandro roa fanampiny eo amin'ny efijery hidin-trano ianao dia mila mampidina ny tweak World Clock7 fotsiny avy any Cydia ary mankafy azy
Amin'ny Light Pad HD dia tsy mila mitady boaty maivana intsony isika hahafahana mitady amin'ny alàlan'ny fatiantoka na ny slide taloha.
ClearFolders: ataovy mangarahara ny fiafaran'ny folder-nao (Cydia)
Raha tsy tianao ny ambadika volondavenona amin'ny lahatahiry iOS 7, azonao atao ny manao mangarahara ny any aoriana noho ny tweak Cydia vaovao antsoina hoe ClearFolders
iKeywi HD dia tweak ho an'ny iPad izay hanisy tsipika fahadimy eo amin'ny fitendrentsika hanamorana ny fanoratana ao anatin'ny fitaovana.
Bluepicker: mifandray amin'ireo fitaovana Bluetooth misy fihetsika (Cydia)
Te hampifandray ireo fitaovanao Bluetooth amin'ny iPad anao amin'ny fihetsika tokana sy mikasika ny efijery ve ianao? Ampiasao ilay tweak Bluepicker izay hamakafaka anao anio!
Live Effects Enabler: sivana iOS 7 ho an'ny iDevices rehetra (Cydia)
Ireo sivana azo ampiharina amin'ny fakan-tsary (mivantana) dia tsy misy amin'ny iDevices rehetra misy iOS 7 fa miaraka amin'ny tweets mivantana Live Effects Enabler, eny.
Te-hamerina ilay feo henonao ao amin'ny iOS 6 ve ianao rehefa manidy sy mamoha ny fitaovanao? Miaraka amin'ny tweak vaovao avy any Cydia, UnlockSound7, azonao atao.
Te hahazo ny lalao Modern Combat 4: Zero Hour maimaim-poana ve ianao?
Ny tranokalan'ny lalao video, IGN, dia namoaka fanentanana vaovao ahafahan'ny mpampiasa misintona ny lalao tsara maimaimpoana: "Modern Combat 4: Zero Hour".
Photoful dia fampiharana sary tena tsara izay manolotra safidy hafa, amin'ny lafiny maro, tsara kokoa noho ny iOS 7 mihitsy.
iPort: iPad ary tranga mijanona tsy misy tariby
iPort dia mitondra fonosana ho antsika, izay ankoatry ny fiarovana ny iPad, dia mamela antsika handoa vola ihany koa ilay fitaovana nefa tsy mampiasa tariby.
Misaotra ny tweak MultiIconMover ahafahantsika mamindra rindranasa marobe amin'ny fantsom-bokintsika amin'ny fotoana iray amin'ny alàlan'ny fanindriana ireo fampiharana sy famindrana ny iray mankany amin'ilay toerana irina.
SkipLock, mamoha ny terminal anao raha tsy mihetsiketsika ny efijery (Cydia)
Ity fanovana ity, SkipLock, dia hanampy antsika hamaha ny terminal misy antsika nefa tsy mila soloina ny efijery.
BytaFont 2: ovao ny fonon'ny fitaovanao (Cydia)
Imbetsaka izahay no nieritreritra ny hanova ny endritsoratra ao amin'ny iOS 7, saingy tsy afaka. Manomboka izao, miaraka amin'ny tweak BytaFont 2 dia vitantsika izany.
Messages Customiser dia fanovana vaovao izay mamela ny fanovana ny lokon'ny balaonina ao anaty chat iMessage
Jailbreak iPad 2 miaraka amin'ny iOS 7
Raha vantany vao voavaha ny olana amin'ny jailbreak ny iPad 2 miaraka amin'ny iOS 7, dia manoro anao torolàlana momba ny fomba hanaovana izany izahay.
Mamorona tranga Mini iPad anao miaraka amin'ny LEGO
Misaotra an'i LEGO sy Belkin afaka mamorona tranga manokana ho an'ny iPad Mini izahay
Ny ZAGGKeys Folio dia fitendry iray mitovy amin'ny maodely iPad Mini. Fitaovana iray ihany io amin'ny ankapobeny fa lehibe kokoa mifanaraka amin'ny iPad Air.
'VersaKeyboard' ny tranga izay mitondra ny zavatra ilainao amin'ny iPad Air
VersaKeyboard dia iray amin'ireo fonosana fitendry tsara indrindra izay hivoaka amin'ny telovolana voalohany amin'ny taona 2014 ho avy.
Ny Real Racing 3 dia efa manana maody marobe amin'ny fotoana tena izy
Ao amin'ny fanavaozana farany ny Real Racing 3 dia misy zava-baovao mahaliana: ny maody marobe amin'ny fotoana tena izy amin'ny alàlan'ny Game Center
Spotify ho an'ny iPhone sy iPad, azo alaina maimaimpoana
Spotify ho an'ny iPhone sy iPad dia lasa maimaim-poana. Notsapainay izany ary milaza aminao ny vaovao
Fanomezana Krismasy: tranga mini iPad Retina
Miverina izahay miaraka amin'ny fanontana iray hafa an'ny lahatsoratra Krismasy fanomezana, amin'ity tranga ity dia mifantoka amin'ny tranga iPad mini Retina izahay.
Ny pensilihazo no fitaovana voajanahary indrindra amin'ny fahazoana hevitra amin'ny taratasy. Ny stylus dia manana endrika tsara tarehy mitazona hatrany ny fanoratana.
Ny Bluetooth 4.1 vaovao dia mitondra fanatsarana ny fahombiazan'ny asa, fitoniana ny fifandraisana ary ambany kokoa ny fanjifana bateria
Ny iPad Air antsika dia manana vidiny ambony ho anay, ka tsara indrindra ny miaro ny fitaovantsika amin'ny kojakoja avo lenta.
Infuse 2, ilay mpilalao horonantsary tsara indrindra ho an'ny iOS, efa misy izao
Infuse 2, miaraka amin'ny fidirana amin'ireo kapila zaraina sy mifanaraka amin'ny endrika video, dia azo alaina ao amin'ny App Store
iClarified dia mampitaha ny hafainganam-pandehan'ny iPad rehetra navoaka ankehitriny miaraka amin'ny horonan-tsary, ireo mpandresy dia ireo fitaovana A7 vaovao.
Fanomezana ho an'ny Noely: Fitaovana
Atombotsika ho an'ny fanomezana Krismasy ny lahatsoratray. Amin'ity indray mitoraka ity dia hahita kojakoja premium ho an'ny iPad-nao ianao.
Fanavaozana ny herinandro: Spotify, Procreate ary maro hafa
Indray mandeha indray, amin'ny iPad News dia mamakafaka ireo fanavaozana tsara indrindra amin'ny herinandro izahay: Spotify, Procreate, Jetpack Joyride ary Badland. Inona ny hevitrao?
iTunes Match VS Google Play Music (I): Ampidino ny mozikao
Hodinihinay ny iTunes Match sy ny Google Play Music, serivisy roa tena mitovy ary ampitahainay ny zavatra atolotray anay.
iOS 7 dia manana fihetsika maro hanatanterahana hetsika isan-karazany ary anio dia hasehontsika anao tsirairay avy izy ireo
Ahoana ny fanovana ny haben'ny endri-tsoratra ao amin'ny iOS 7?
Amin'ity lahatsoratra ity dia hasehonay aminao ny fomba fanovana ny haben'ny endri-tsoratra an'ny iOS 7 amin'ny iPad ampiasainao amin'ny alàlan'ny Settings sy Accessibility
Ahoana ny fomba hanokafana rakitra ePub ao amin'ny iBooks nefa tsy mampiasa iTunes?
Amin'ity lesona ity dia hampianatra anao ny fomba hanokafana rakitra ePub izahay nefa tsy mampiasa iTunes amin'ny alàlan'ny mailaka anao
IPad Mini mizara processeur A7 amin'ny iPhone 5s ary mihazakazaka amin'ny hafainganam-pandeha mitovy
IPad dia mety misy fampahalalana saro-pady izay tsy hitan'ny rehetra. Raha te hianatra hametraka teny miafina amin'ny iPad ianao dia tranokalanao ity
Ahoana ny fomba hamakiana ny bokintsika iOS 7 ho azy: VoiceOver
VoiceOver dia singa iray lehibe amin'ny iOS 7 izay mamela antsika hampiasa iPad kely kokoa hamakiana boky, ohatra.
Ny horonantsary dia miompana amin'ny fampisehoana ny kalitaon'ny e-ink Kindle Paperwhite, nohamarinina hamakiana amin'ny hazavana mazava.
iPhone 5s vs. iPad Air, fakantsary iSight [gallery]
Galerie miaraka amin'ny sary mampitaha ny fakantsary anoloana an'ny kintan'ny kintana Apple roa: ny iPhone 5s sy ny iPad Air vaovao.
Ny iPad Air dia sarany ambany kokoa noho ny an'ny Apple raha oharina amin'ireo maodely teo aloha, saingy mandroso sy lafo kokoa noho ny fampisehoana Retina teo aloha ny fisehoany.
Ity no iPhone Air [hevitra]
Androany isika dia nahita konsep izay mampiseho amintsika hoe hanao ahoana ny iPhone manaraka raha toa ka naka ny toetra mampiavaka ny iPad Air vaovao izy.
Mieritreritra ny hahazoana takelaka? Asehonay anao ny antony tokony hanapahanao hevitra amin'ny iPad fa tsy ny takelaka hafa
Eto ianao dia aseho ny fahasimban'ny ankamaroan'ny singa mandrafitra ny iPad Air vaovao
Tucano dia manolotra ireo karazana tranga vaovao momba ny iPad Air
Tucano dia nanolotra ireo fonony vaovao momba ny iPad Air
Miaraka amin'ny fanavaozana ny iOS 7, nanararaotra namorona ny rindranasa ho an'ny iPhone i Incredimail ary mampifanaraka izany amin'ny iDevice satria iPad ihany no misy azy
Miniot, mpanamboatra manokana amin'ny fampifangaroana hazo sy iDevices, dia nandefa ny Cover for iPad mini, kojakoja avo lenta vita amin'ny faritra hazo.
Ny fisafidianana ny rindranasa noforonina sy nofidian'i Apple nohamarinina ho an'ny maodely iPad Air sy iPad Mini Retina vaovao
Nanavao tanteraka ny pejy i Apple, ny mpandika teny ho an'ny iOS.
Famintinana ny zava-drehetra nitranga tamin'ny hetsika Apple omaly, izay nanolorany, ankoatry ny zavatra hafa, ny iPads vaovao.
Miaraka amin'ny iOS 7 vaovao dia tsy mila mitady rindranasa avy amin'ny antoko fahatelo (Google Chrome) intsony izahay mba hahafahana mampiasa fizahana tsy mitonona anarana amin'ny iDevices.
Izahay dia mamakafaka ireo toetra mety hitranga amin'ny iPad Mini 2 asehon'i Apple ny talata 22 ho avy izao
Indray mandeha ao amin'ny iPad News dia asehonay anao ny tutorial mifandraika amin'ny iOS 7: ny fomba famoronana hetsika amin'ny kalandrie raha ivelan'ny fampiharana.
Ahoana ny fomba fanadiovana ny cache an'ny iTunes Store amin'ny solosainao
Amin'ny tranga maro dia tsy velombelona ny fivarotana iTunes ampiasaina amin'ny solosaina. Raha tiana havaozina izy ireo dia tsy maintsy foananay ilay cache.
Manolotra vazivazy mahatsikaiky izahay fa azonao lalaovina amin'ny namanao izay mampiasa iPhone na iPad
Manazava tsikelikely ny fomba fanondranana ny tranomboky iTunes amin'ny toerana hafa izahay
Calendars 5 by Readdle dia fampiharana kalandrie vaovao izay manome asa isan-karazany amin'ny ambiny, ka mahatonga azy io ho iray amin'ireo safidy tsara indrindra amin'ny kalandrie IOS
Apple dia afaka mampiseho ny iPads vaovao amin'ny hetsika izay hitranga, raha ny tsiliantsofina farany, tamin'ny 22 Oktobra
Ahoana ny fomba hahitana ny safidin'ny mpamaky ao amin'ny iOS 7
Ankehitriny raha tsy misy skeumorphism, ny safidin'ny Reader dia tsy manana toerana hametrahana litera sasany izay tsy manana fanamaivanana hanasongadinana azy ireo sy hampisaraka azy ireo amin'ny aoriana.
Fizarana faharoa amin'ny boky torolàlana Quickoffice. Tamin'ny voalohany dia nifandray tamin'ny antontan-taratasy izahay. Ankehitriny dia anjaran'ireo takelaka.
Jot Script, pensilihazo teboka tsara ho an'ny iPad
Ny Jot Script Evernote Edition dia noforonina mba ho lasa fitaovana fanoratana ankafizinao indrindra, famaranana metaly matte, faritra misitery ...
Famerenana ny Intuos Creative Stylus nataon'i Wacom, pensilihazo nomerika ho an'ny iPad
Notsapainay ny Wacom's Intuos Creative Stylus, stylus iPad tsara misy sensor sensor.
Ny sary mihetsika sy sary amin'ny iOS 7 dia miteraka olana amin'ny mpampiasa sasany
Mpampiasa iOS maro no mimenomenona fa ny sarimiaina sy ny vokany hafa dia manome azy ireo olana toy ny maloiloy, vertigo, na fanina.
Ny mpampiasa iOS 7 sasany dia manana olana amin'ny fampandehanana ny iMessage sy FaceTime. Avy amin'ny iPad News dia hanandrana hamaha izany izahay.
Mamaha ny olan'ny fifandraisana Wi-Fi mety hitranga ao amin'ny iOS 7 noho ny famerenanao ny lahasa sasany.
Ivotoerana fanaraha-maso ao amin'ny iOS7, inona izany ary ny fomba fiasany
Amin'ny alàlan'ny Control Center, ity endri-javatra vaovao an'ny iOS 7 ity, dia manana safidy hiditra mivantana amin'ny Mode Airplane, Wi-Fi, Bluetooth, aza manelingelina isika
Microsoft dia nandefa ny mpandimby ny takelaka Windows RT, Surface 2. Miaraka amin'ity maodely nohavaozina ity dia te hanandrana handresy ireo mpampiasa iPad tsy afa-po izy.
Izy ireo dia mahavita mamily ny rafitra famantarana ny dian-tanan'ny iPhone 5S
Amin'ity lahatsoratra ity dia tiako ny milaza aminao ny zavatra niainako mahatsiravina amin'ny fametrahana ny iOS 7 amin'ny iPad 2.
Rohy fampidinana mivantana IOS 7 ho an'ny fitaovana rehetra
Manolotra anao ny rohy fampidinana mivantana an'ny iOS 7 ho an'ny fitaovana rehetra izahay
Atolotray anao ny rohy fampidinana ho an'ny iOS 7 GM, beta farany amin'ny rafitra fiasa Apple vaovao.
Ny rindranasa tsara indrindra hamoronana, hanovana ary hizarana antontan-taratasy
Ao amin'ny App Store, ho hitantsika ireo fampiharana an-jatony izay manolo ny Office. Atolotray anao ireo fampiharana 10 ambony hamoronana, fanovana ary fizarana rakitra.
Incredimail, Mail + ho an'ny Outlook ary Evomail: rindranasa telo izay ahafahantsika manamboatra ny mailaky ny orinasanay amin'ny alàlan'ny POP / IMAP.
Jawbone dia manolotra ny Mini Jambox, mpandahateny Bluetooth mini.
Jawbone dia nanolotra ny Mini Jambox vaovao azy, mpandahateny Bluetooth kely izay azonao raisina na aiza na aiza
Roa taona niasan'i Tim Cook ho CEO an'ny Apple
Roa taona izay no lasa tamin'i Tim Cook izay lohan'i Apple. Ny Maps fiasco, ny fanombohana ny iPad Mini ary fotoana hafa dia kintana amin'izy ireo.
Fahazoana mifanitsy: ataovy virtoaly Mac sy Windows amin'ny iPad anao
Parallels Access ho an'ny iOS dia ahafahanao mihazakazaka fampiharana Mac na Windows amin'ny iPad anao miaraka amina interface izay namboarina mba hifehezana ny fifehezana.
BitTorrent Sync ho an'ny iOS dia mamela anao handrindra rakitra amin'ny fitaovana rehetra
BitTorrent Sync dia fampiharana multiplatform izay ahafahanao mizara rakitra eo anelanelan'ny fitaovana rehetra napetrany.
Apple dia nanavao ny fantsona misy amin'ny Apple TV, nanampy Vevo, Disney Channel, Disney XD sy maro hafa, na dia any amin'ny firenena sasany aza.
Amin'ity lahatsoratra fahatelo ity ao amin'ny andiany "Getting Started with iBooks", hiresaka momba ny fomba hanombohana mamaky amin'ny iBooks izahay: ny fomba famadihana pejy, ny famelana tsoratadidy ary maro hafa.
Ny zava-maniry vs. Zombies 2 dia havaozina amin'ny alàlan'ny fanamboarana ireo fianjerana
Ny fanavaozana vaovao ny Plants vs. Zombies 2 dia manamboatra ireo bibikely izay indraindray manakana ny fandrosoana amin'ny alàlan'ny haavony.
Amin'ity fotoana ity dia hiresaka momba ny fomba hividianana boky amin'ny fampiasana ny Store iBooks na ny fomba fampidirana EPUB na PDF amin'ny iPad amin'ny alàlan'ny iBooks.
Manomboka amin'ny iBooks (I): Jereo aloha ny app
Ny famakiana boky dia asa tena tsara hanamafisana ny maso, ny ati-doha, ny fahitana ... Amin'ny iPad dia azontsika atao izany noho ny fampiharana: iBooks
Ahoana no hamantarana ny maodelin'ny iPhone sy iPad
Asehonay aminao ny tabilao sasany ahafahanao mamantatra mora ny maodely iPad na iPhone izay anananao fotsiny amin'ny fijerena ny kaody ao ambadika
Wacom dia manolotra Stylus vaovao, ny Intuos Creative Stylus, izay misaotra ny tsindrin-tsindriny dia mamela anao hanao tsipika matevina samihafa.
Fitaovana mifanentana IOS 7 sy endri-javatra misy
Fitaovana inona avy no hifanaraka amin'ny iOS 7 ary inona ny endri-javatra hananan'ny tsirairay amin'izy ireo? Azavainay aminao amin'ny antsipiriany izany.
Azonao atao ny mizaha toetra Beta 6 an'ny iOS 7 vaovao amin'ny alàlan'ny fampidinana ireo rakitra ilaina amin'ny rohy izay atolotray avy amin'ny MEGA.
Zava-misy na tantara foronina: fika sivy izay heverina fa hamonjy ny ain'ny bateria
9 amin'ireo toro-hevitra fitsinjarana bateria mahazatra indrindra nosedraina. Atorinay anao ny valiny.
Ahoana ny fomba fiasan'ny iOS 7 toerana matetika
Ny serivisy toerana matetika an'ny IOS 7 dia miteraka resabe. Ahoana ny fomba fiasa ary inona no ilana azy?
Ny fijoroana HiRise ho an'ny iPad Mini sy iPhone 5 dia mampifangaro ny famolavolana amin'ny fahaizan'ny toetr'andro. Famaranana mahafinaritra amin'ny vidiny lafo.
Ny vaovao rehetra an'ny iOS 7 Beta 5 ho an'ny iPhone sy iPad
iOS 7 Beta 5 dia mitondra fanovana kosmetika maro, safidy fanamboarana vaovao ary fiasa vaovao. Manana azy ireo miaraka amin'ny sary isika.
Iconical dia rindranasa avy amin'ny App Store izay mampanantena fa afaka manova ny sarin'ireo fampiharana mihoatra ny 200 miaraka amin'ny dingana kely vitsivitsy sy avy amin'ny fitaovanao.
iOS 7 dia hamela ny fikirakirana ny Apple TV amin'ny iPhone na iPad amin'ny alàlan'ny Bluetooth.
Ny iOS 7 Beta 4 dia efa nivoaka izao ary nosedrainay izy io. Lazainay aminao ny vaovao lehibe izay entiny ho an'ny iPad sy iPhone.
Steve Jobs dia nandao ny mpanatrika Macworld 1999 tsy nahateny intsony rehefa nanolotra ny solosaina finday voalohany tamin'ny WiFi, ny iBook G3
Google ChromeCast sy Apple TV ve mitovy fitaovana? Manalavitra azy io, tsy mitovy amin'ny zavatra itovizany izy ireo. Azavainay ny fomba fiasan'izy ireo
Misy patanty vaovao avy any Apple mampiseho rafitra iray izay mijery ny fomba fampiasanao ilay fitaovana hampiakarana ny androm-piainana.
Sandisk dia mandefa ireo kapila USB misy WiFi
Sandisk dia manolotra ny kapila USB vaovao misy fifandraisana WiFi hifandraisany amin'ny findainao
Vaovao farany Bad Piggies mitondra ambaratonga vaovao, fitaovana ary herinaratra, ary koa ny safidy vaovao hamahana ny mpanjaka kisoa
Angry Birds dia efa mandrindra ny lalao ao anaty rahona
Rovio dia manolotra rafitra vaovao handefasana lalao eo anelanelan'ny fitaovana, izay hamoronana kaonty amin'ny mpizara azy ireo.
Griffin PowerDock 5, famahanana base ho an'ny fitaovana 5, efa misy izao
Griffin dia efa manana ny base PowerDock 5 misy mamela ny famandrihana hatramin'ny fitaovana 5 hafa.
Ny vaovao rehetra an'ny IOS 3 Beta 7
Apple dia namoaka ny iOS 3 Beta 7 miaraka amin'ny fanatsarana tarehy sy zava-bita. Mampiseho anao rehetra izahay miaraka amin'ny sary.
Fanadihadiana sy famolavolana ny klavier I-CaseBoard: #GanaTecladoiPad
Ao amin'ny iPad News dia hofakafakainay ny kitendry I-CaseBoard ho an'ny iPad 2 sy iPad 3 ary hamboarinay ny iray amin'ireo fitendry ireo amin'ireo mpanaraka ny tranonkala.
Ny iOS 7 sy ny Find my iPad dia manakana ny famerenana amin'ny laoniny ny fitaovanao tsy misy fanekenao
Ny Find My iPad dia misy safidy fiarovana vaovao ao amin'ny iOS 7 izay manakana ny olona tsy hamerina amin'ny laoniny ny fitaovanao
Ny iOs 7 indray dia mamela anao hampifanaraka ny fifandraisanao amin'ny kaonty Google anao.
Ny effets Parallax an'ny iOS 7 dia mahagaga, manome fiantraikany lalina amin'ny efijery amin'ilay fitaovana. Azavainay ny fomba anaovan'ny Apple azy.
Ity no iOS 7 Beta 2 amin'ny iPad
Apple dia nanangana ny iOS 7 Beta 2 ho an'ny iPad ary efa manana ny sary voalohany miaraka amin'ny vaovao lehibe izahay
Ireo fitaovana Bluetooth dia afaka mahazo fampandrenesana ao amin'ny iOS 7
iOS 7 dia hamela ireo fitaovana mifandray amin'ny Bluetooth handray fampandrenesana noho ireo Apple API vaovao.
Ny iOS 7 dia misy zavatra tsy ampoizina betsaka noho ny niseho tamin'ny haino aman-jery rehetra. Ampianay anao fotsiny ny sasany izay mety tsy fantatrao.
Hitan'izy ireo ny lesoka fiarovana vaovao izay misy fiatraikany amin'ny fameperana iOS ary mamela ny filaharana hiditra mandritra ny fotoana tsy voafetra
Inona no antenaintsika amin'ny WWDC 2013?: Hardware
Mihena ny isan'ny WWDC 2013 ary hamita ny fanontaniantsika momba izay antenainay dia manolotra ireo fitaovana hitanay tamin'ny 10 Jona izahay
Ny iPod Touch 5G 16GB vaovao akaiky kokoa
Tonga ireo singa voalohany amin'ny iPod Touch 5G vaovao ary efa manana sary sy horonan-tsary izay mampiseho anay ny antsipiriany akaiky izahay.
Vaovao iPad Mamaly: fanadihadiana momba ny seranam-piaramanidina Apple Express Extreme, Express ary TimeCapsule
Apple dia manome router telo samihafa ho antsika: Airport Extreme, Express ary TimeCapsule. Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny maodely tsirairay?
Dolry HIFI Stone dia mitondra AirPlay amin'ny mpandahateny 30-pin anao
Dolry HIFI Stone dia adaptatera izay hampifanaraka ny mpandahateny anao AirPlay
Ny orinasam-pifandraisana finday Square dia nanolotra ny Square Stand for iPad, fototra iray misy mpamaky karatra misy ao anatiny izay mikendry ny hisolo ny kaonty vola.
Amboary ny iPad (II): iPad 3 Front Panel
Ny tontonana aloha amin'ny iPad dia iray amin'ireo singa tapaka matetika. Manazava ny fomba fanoloana azy izahay.
Ao amin'ny Actualidad iPad dia asehoko anao izay ny fampiharana 10 tiako indrindra amin'ny iPad faharoa, anisan'izany ny lalao sy ny rindranasa.
Ao amin'ny ActualidadiPad dia manome anao lisitry ny fampiharana iPad tonga lafatra folo ampiasain'ny Managers Community.
Amin'ny iPad News indray izahay dia hanolotra zavatra vaovao anao, faritra vaovao: Amboary ny tenanao ny iPad. Amin'ity indray mitoraka ity dia asehonay anao ny bokotra trano.
Seagate Wireless Plus Performance Review sy Seagate Media App ho an'ny iOS
Logitech FabricSkin, fonosana misy klavier integral ho an'ny iPad amin'ny endriny madio indrindra amin'ny Surface
Logitech dia manolotra ny tranga vaovao an'ny FabrickSkin, izay manasongadina fitendry mitendry amin'ny fomban'ny Microsoft Surface marina.
Tapany voalohany amin'ny fanadihadihana ao amin'ny Seagate Wireless Plus 1TB, kapila WiFi ahafahanao milalao ny atiny multimedia amin'ny iPad sy iPhone anao.
Bokotra eo an-trano: Raha tsy mandeha izy dia manana assistive Touch (II) izahay
Rehefa mijanona tsy miasa ny bokotra Home dia manana zavatra roa azo atao isika: ampifanaraho izany na ampiasao fotsiny ny assistive Touch hifehezana ny bokotra.
Ahoana ny fampiasana drafitra amin'ny mailaka ho an'ny iOS
Ny fampiasana drafitra amin'ny mailaka dia tena tsotra ary mety ho tena ilaina tokoa rehefa mamela mailaka antsasa-kila ianao.
CustomGrid 2 dia tweaky Cydia vaovao izay ahafahanao manova ny isan'ny andalana sy tsanganana eo amin'ny fantsom-bokinao, ary koa ny toerana eo anelanelan'ny sary masina.
Ny client YouTube ho an'ny iOS dia nohavaozina ary ankehitriny dia misy karazana AirPlay hilalao horonantsary ao amin'ny SmartTV na console ankafizinay.
Sonico Mobile dia namoaka ny Files App, mpitantana fisie namboarina tsara ho an'ny iOS.
SketchBook Pro ho an'ny iPad dia novaina hahafahana manoratra horonantsary amin'ny Time-Lapse
Nanavao ny fampiharana SketchBook Pro ho an'ny iPad i Adobe nanampy fanampiana ho an'ny firaketana ny Time-Lapse.
Tim Cook dia nanao lahateny tao amin'ny Goldman Sachs momba ny teknolojia ary namela andian-teny mahaliana maro.
Manampia GPS amin'ny WiFi WiFi anao
Bad Elf GPS dia manampy mpandray GPS amin'ny iPad anao, miaraka amin'ny haben'ny vola madinika, mifanaraka amin'ny mpampifandray 30 pin an'ny iPad anao hahafahanao mampiasa azy io ho mpitety
Fizarana faharoa amin'ny lisitr'ireo sosokevitra momba ny fampiharana iPad ho an'ny mpahay siansa amin'ny informatika.
Ampiasao ny iPad anao toy ny klavie misy hitsin-dàlana ho an'ny Mac / Pc misy Hotkeys
Hotkeys ho an'ny iOS, Mac ary Windows dia mamela anao hampiasa ny iPad ho kitendry feno hitsin-dàlana azonao ampiasaina amin'ny fampiharana mahazatra anao.
Fizarana voalohany amin'ny lisitry ny fampiharana iPad ho an'ny mpahay siansa amin'ny solosaina.
Mampiseho safidy telo amin'ireo mpihazona fiara iPad misy vidiny samy hafa izahay mifanaraka amin'ny filàna isan-karazany.
i-CaseBoard, fitendry miaraka amin'ny bateria ho an'ny iPad Mini
Ny i-CaseBoard dia fitendry mandeha ho batery ho an'ny iPad mini. Ny keyboard dia mifandray amin'ny alalàn'ny Bluetooth 3.0 ary mamela azy hampiasaina mandritra ny 55 ora ny batterie raha tsy mamerina mamerina.
ClamCase Pro dia mamadika ny iPad ho Macbook
ClamCase Pro no tranga ClamCase vaovao, vita amin'ny alimika sy polycarbonate fotsy, manome fiarovana rehefa "mamadika" ny iPad ho Macbook
Soundwaves dia nahavita nametraka iPad Mini ho rafitra haino aman-jery tafakambana amin'ny rafitra audio Sony.
Voamarika: boaty mailaka tena ilaina ho an'ny mailaka anay.
Manolotra antsika ny mailaka ny fandefasana hafatra sasantsasany izay nofidianay tao anaty boaty mailaka antsoina hoe "marihina" mba hahafantarana azy ireo mora foana.
Ny fanangonana ireo fampiharana 10 tiako indrindra tamin'ny 2012 ho an'ny iPad: lalao, haino aman-jery, famokarana, Internet ...
i-CaseBoard, fitendry Bluetooth misy bateria ho an'ny iPad
Ny i-CaseBoard dia kitendry ivelany mifanaraka amin'ny iPad 2, 3 ary 4. Miasa amin'ny alàlan'ny Bluetooth izy io ary manana bateria ivelany misy adiny 80 amin'ny fiainana fanampiny.
Famerenana ny base multi-load Quirky Converge
Ny fananana fotodrafitrasa ahafahanao manafatra fitaovana maromaro amin'ny fotoana iray dia tena ilaina tokoa ho an'ireo izay manana trano maromaro. Ny Quirky Converge dia miakatra hatramin'ny 4
Sarona efatra izay miaro ny iPad Mini anao ary mety ho fanomezana tsara amin'ity Krismasy ity.
Mamorona Playlists YouTube ho an'ny iPad
Mampiseho ny fomba famoronana playlists na manampy horonan-tsary amin'ireo efa misy avy amin'ny fampiharana YouTube teratany ho an'ny iPad.
Amin'ny fitaovana ampiasain'ny fianakaviana iray manontolo dia zava-dehibe ny famerana ny atiny sy ny rindranasa sasany mba tsy hahazoan'ny rehetra miditra.
Ampitomboy ny haben'ny lahatsoratra amin'ny iPad-nao
Ny fampitomboana ny haben'ny lahatsoratra amin'ny fampiharana sasany toy ny Mail na Messages dia mety tena ilain'ny olona manana olana amin'ny fahitana
Tranga raitra hiara-miasa amin'ny iPad anao
Ny iPad dia mipoitra bebe kokoa hatrany ho fitaovana asa fototra. Manangona tranga kanto 4 izahay hiara-miasa amin'ny fitaovanao
Kitendry Tabitech Logitech: keyboard Bluetooth ho an'ny iPad anao
Ny Logitech Tablet Keyboard dia kitendry bluetooth ho an'ny iPad misy famaranana kalitao, milamina amin'ny fanoratana, amin'ny Espaniôla ary hazavana entina
Jereo ny tranga DODOCase Classic lehibe ho an'ny iPad, iray amin'ireo tranga avo lenta indrindra eny an-tsena. Sarony vita tanana amin'ny tanana any San Francisco izy ireo.
Ny iPad Mini dia efa napetraka ao amin'ny dashboard an'ny fiara
Mpampiasa iray no nanamboatra ny dashboard an'ny fiarany hahafahany mampiditra ny iPad Mini ary hampiasa azy io ho ivon-haino aman-jery.
Vaovao tsy dia tsara loatra no voamarina, ary ny iPad mini indrisy fa tsy manaraka fenitra amin'ny ...
Ohatrinona ny iPad 3 eo ambanin'ny Apple Recycling Program?
Ny iPad vaovao dia miaraka amina charger mahery vaika kokoa
Ilay charger 12W vaovao izay amidin'i Apple miaraka amin'ny iPad fahefatra iPad dia mahavita manafatra ilay takelaka amin'ny fotoana fohy noho ny andiany 10W
Famerenana horonantsary: ​​ZAGG portfolio Keyboard Case
Famerenana horonantsary: ​​Tranga fitendry ZAGG portfolio
Mampiseho inona ny zavatra isan'andro amin'ny fiainantsika? Mitadiava hevitra amin'ity boky ity
iTypewriter dia fitaovana ho an'ny iPad izay manova ny takelaka Apple ho lasa milina fanoratana marina.
Santillana dia namoaka fanangonana tantara vaovao mifandraika amin'ny iPad antsoina hoe Enchanted Trunk izay manana ny tarehiny Lina sy Oto.
Na dia tena tiako aza ny mividy zavatra amin'ny tranokala toa ny DealExtreme na Buyincoins, dia tiako ihany koa ny ...
Google Chrome dia misy amin'ny iPad izao
Ny browser Google Chrome an'ny Internet an'ny iPad sy ny iPhone dia azo alaina ao amin'ny App Store ankehitriny.
Mihodina 40 taona i Atari ary mamela anao misintona ny lalao 100 rehetra avy amin'ny sehatra Atari Greatest Hits ho an'ny iPad sy iPhone maimaim-poana
A Midsummer Night's Dream, boky iray hafa azo ifandraisana ho an'ireo ankizy kely
A Midsummer Night's Dream dia boky iray hafa mifanakalo izay nampiana an'ity fanangonana kilasika literatiora ho an'ny iPad ity
Apple dia manolotra iPad Smart Case ho an'ny iPad 2 sy iPad Vaovao
Ny iPad Smart Case dia miaro ny ao ambadiky ny iPad ary manolotra fiasa mitovy amin'ny Smart Cover amin'ny vidiny 49 euro.
Ny Logitech K760 dia keyboard tsy misy tariby ho an'ny iPad izay ampiasain'ny angovo maivana sy tsiroaroa miaraka amina fitaovana telo.
Kitapo soroka vaovao miaraka amina endrika mahaliana
Ny tranga Griffin Survivor ho an'ny iPad 2 sy iPad 3 vaovao dia miaro anao amin'ny loto, vovoka, orana, riandrano. Mety ho an'ny atleta, tendrombohitra ary morontsiraka.
Aperture 3 - Basic Lessons in Spanish "dia boky maimaimpoana ho an'ny iPad ho an'ireo izay maniry ny hampiasa ny programa Apple.
Ny Targus AKB32ES dia keyboard Bluetooth tsy misy tariby ho an'ny iPad rehetra, miaraka amina fiasa manokana ho an'ny iOS ary amin'ny vidiny mirary tokoa.
Scotland Yard, ny lalao amin'ny herinandro ao amin'ny App Store
Scotland Yard ho an'ny iPhone sy iPad dia ny kinova nomerika an'ny lalao board izay noforonina 30 taona lasa izay izay dia tsy maintsy mitady an'i Mister X.
Apple dia nanomboka nanova ny anarana "iPad WiFi + 4G" ho "iPad WiFi + Cellular" any amin'ny firenena sasany hialana amin'ny olana ara-dalàna.
Fonosana: fonosana lamba Alcantara, toy ny fanjonan'ny fiara avo lenta, Porsche, lamborghini, Mercedes-Benz
Zavatra, ny fampiharana amin'ny herinandro ao amin'ny App Store
Ny zavatra dia fampiharana vaovao amin'ny herinandro ao amin'ny App Store. Miatrika ny iray amin'ireo GTD (mpitantana ...
Wallpaper 200 ho an'ny Retina Display an'ny iPad vaovao
Raha efa manana ny iPad vaovao eo am-pelatananao ianao dia afaka nanamarina fa mahita sary milay ary miaraka amin'ny ...
Tsy voatery niandry ela akory izahay vao hahita fanadihadiana video momba izay hitranga rehefa ...
Ny Logitech Speaker Stand for iPad dia fijanonana mora vidy miaraka amin'ny mpandahateny stereo (6W RMS) ary ahafahantsika misafidy ny orient.
Ny iPad vaovao, ny olany amin'ny fifandraisana WI-FI sy ny fomba fanamboarana azy ireo
Ny iPad vaovao dia toa misy olan'ny fifandraisana WI-FI sy tsy fandraisana tsara. Ampianarinay ianao hamaha ity olana ity.
Antony efatra mahatonga ny iPad vaovao hihombo hafanana
Eny, ny iPad vaovao dia mafana kokoa noho ilay taloha, saingy misy antony dimy voalohany mahatonga an'ity ...
Hividy na tsia hividy iPad vaovao? Manampy anao izahay amin'ny fanapaha-kevitra
Manolotra antony samihafa izahay momba ny antony tsy tokony hividiananao ny Apple iPad vaovao, ilay mpandimby ny iPad 2 miaraka amin'i Retina Display.
Samsung dia namoaka tabilao fampitahana ny Galaxy Note 10.1 vs ny New Apple iPad hanaratsiana ny vokatra vaovaon'i Apple.
Antontan'isa amin'ny iPad
Ny vanim-potoana taorian'ny PC dia natambatra, amin'ny lafiny lehibe, amin'ny iPad sy ny fandraisana lehibe efa azony ...
Notsapainay ny mpandahateny X-Mini II tamin'ny iPhone sy iPad
Ny mpandahateny ivelany X-Mini II dia toa tsara tokoa hamenoana ny feon'ny iPhone na iPad, kely izy io ary misy bateria.
Gamesculpt 3D dia fitaovana iray izay hanampy anao hamorona ny lalao 3D anao voalohany ho an'ny iPad, ...
Soraty amin'ny tanana ny naoty ary avadiho ho lasa lahatsoratra miaraka amin'ny WritingPad izy ireo
WritingPad dia fampiharana ho an'ny iPad izay ahafahanao mandray naoty haingana amin'ny alàlan'ny fampiasana fotsiny ...
Kitendry Wireless ho an'ny iPad amin'ny vidiny lafo
kitendry ipad mora vidy
Steelie, fijoroana kely indrindra ho an'ny iPad
Ny fahafaha-mitondra ny iPad dia mahatonga ny fitaovana hanatrika ny toerana rehetra ao an-trano. Steelie dia ...
Ny Mad Bird dia tonga amin'ny iPad amin'ny lalao hazakazaka mahafinaritra
Avy amin'ny tanan'i Chillingo dia misy lalao hazakazaka mahaliana izay ny Crazy Bird dia ...
Ny sandan'ny fiara PURO dia mipetaka ho an'ny iPad sy iPad 2
Ny nofinofin'ny ankizy tsirairay (fa tsy ny zaza loatra) dia ny hahafahana mitsangatsangana mijery sarimihetsika, milalao na mizaha ...
Ny Kit ho an'ny fakantsary fakan-tsary dia fitaovana izay azontsika ampiasaina amin'ny fotoana tsy fahita firy fa tena mahaliana ...
Omaly dia tonga tao amin'ny App Store ny emulator iMAME (heverinay fa noho ny fanaraha-maso), na dia misy ROM 9 aza ...
Christa Sievers dia mitantana fivarotana Etsy antsoina hoe Willow sy Company, toerana amarotany ny fonony vita amin'ny fery sy hoditra. Are…
Azo antoka fa maro aminareo no manao fanatanjahan-tena matetika ary mankany amin'ny gym, na ny tsara kokoa aza, dia manana gym ...
Apple dia maniry ny hanohy hampiroborobo ny iPad ho mpanelanelana amin'ny famakiana boky amin'ny fomba hafa ary amin'ny iray hafa ...
Green Farm 2, lalao Gameloft iray hafa mitovy amin'ny Farmville ho an'ny fitaovana iOS
Nahomby ny Farmville tao amin'ny Facebook, ny Green Farm dia tamin'ny fitaovana iOS ary tadiavin'i Gameloft ...
Ireo fonony vita tanana dia manome endrika manokana sy manokana an'ny iPad anao. Raha mandeha be dia be ianao, a ...
PlugBug, avereno mameno ny iPad sy ny MacBook-nao amin'ny charger iray ihany
Roa ambin'ny folo atsimo no nanomboka nivarotra kojakoja somary mahaliana hahafahantsika manafatra ny MacBook sy ny fitaovana iOS ...
Raha nahita ny fanambarana vaovao momba ny iPad 2 any Espana ianao dia afaka mahita ny ...
Ny fampifanarahana ny navigator TomTom malaza amin'ny iPad dia nidika fa nofidian'i Apple ho fampiharana ny herinandro ao ...
Androany ny FPS napetraka amin'ny ady maoderina tsy misy isalasalana. Battlefield 3 tonga amin'ny ...